पूर्वरानी कोमल र झलनाथ खनालको स्वास्थ्यको पछिल्लो अवस्थाबारे अस्पतालले दियो यस्तो जा'नकारी -
Homeसमाचारपूर्वरानी कोमल र झलनाथ खनालको स्वास्थ्यको पछिल्लो अवस्थाबारे अस्पतालले दियो यस्तो जा’नकारी
May 2, 2021 admin समाचार 326
कोरोना पुष्टि भएर नर्भिक अस्प’ताल भर्ना भएका पूर्वरानी कोमल शाह र एमाले नेता झल’नाथ खनालको स्वास्थ्य अवस्थाका बारेमा राम्रो समाचार प्राप्त भएको छ । दुवै जनाको स्वास्थ्य अ’वस्था सामान्य रहेको अस्पताल स्रोतले जा’नकारी दिएको छ । शाहलाई प्रति मिनट १० लिटर अक्सिजन दिएर उपचार गरिएको र उनको अवस्था सुधार नभएको भन्दै समाचार सार्वजनिक भएपछि अस्प’तालले त्यस्तो खबरको खण्डन गरेको छ ।
शाहको स्वास्थ्य अव’स्थाबारे गरिएका त्यस्तो प्रचारको खण्डन गर्दै अस्पतालले अवस्था सुधारोन्मुख रहेको बता’एको हो । हिजो अस्तिभन्दा धेरै इ’म्प्रुभ भएको छ । अक्सिजनको लेभल पनि बढेर गएको अस्पतालले जनाएको छ । पूर्व रानी अब खत’रामुक्त भएको अस्पतालले जनाएको छ ।
अस्पताल स्रोतले पूर्व’रानी शाहको प्लाज्मा थेरापी विधिद्वारा उ’पचार गरिएको भन्ने भनाइको पनि खण्ड’न गरिएको छ । ‘प्लाज्मा थेरापी भन्ने कुरा सबै बकवास हो । मन’गढन्ते कुरा हो’, स्रोतले भनेको छ ।
यता,कोरोना देखिए’पछि हिजो नर्भिकमै भर्ना भएका पूर्वप्रधानमन्त्री झल’नाथ खनालको अवस्था पनि सामान्य रहेको अस्प’तालले जनाएको छ । खनाललाई पखाला चलेको भएप’नि अरु कुनै स्वास्थय समस्या नभएको स्रोतले बता’एको छ । ‘एकदम नर्मल हुनुहुन्छ । कुनै स’मस्या छैन’,अस्पताल स्रोतले भन्यो । इताजा खबरबाट
December 10, 2020 admin समाचार 3288
April 11, 2021 admin समाचार 918
माओवादी के’न्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डका दुई छोरीहरू रेणु दाहाल र गंगा दाहालले आफ्नी आमा सीता दाहालको फोटो सा’माजिक सञ्जालमा फेसबुकमा सार्व’जनिक गरे । ‘आमा’ क्याप्सन लेखेर सार्वजनिक गरिएको फोटोमा सीता दाहाल पहिले भन्दा धेरै कमजोर र
May 8, 2021 admin समाचार 386
सुतेर पनि इम्युनिटी पावर बढाउन सकिने यस्तो छ जन’स्वास्थ्य विज्ञ डा. पाण्डेको सुझाव (175231)
भाण्टा खाँदा हुने १३ फाइदा’हरु (168948)
कपालमा चाँया परेर हैरान हुनुहुन्छ ? यी हुन् चाँया हटाउने घरेलु उपाय… (168736)
विवाहित महिलाले किन सिउँदोमा सिन्दुर लगाउँछन् , जान्नुहोस रहस्य.. (168359)
छोटो समयमै छिटो कपाल बढाउने तरीका यस्तो छ: थाहा पाहुनुहोस् (167355)
सुशान्त केश’ले लियाे नयाँ मोड, रियाको भाइको ‘गोप्य च्याट’ बाहिरियो…हेर्नुहोस् (166133)
यसरी बनाउनुहाेस्: मात्र केही समयमानै तपाईंको पहेलो दाँत चम्किलो … (165580)
चर्चित हाँस्यकलाकार तथा समाजसेवी धुर्मुसको जन्मदिन आज, कति वर्ष लागे उनी ? थाहा पाउनुहोस् (164057)
लियोनेल मेसी बने विश्वको सबैभन्दा बढी कमाउने फुटबलर, कति कमाए त उनले ? थाहा पाउनुहोस् (158650)